कसरी तयार गर्ने सन्तुलित थाली ? | सुदुरपश्चिम खबर
कस्तो खानपान गर्ने, कति गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराले हाम्रो स्वास्थ्य स्थिती निर्धारण गर्छ ।
जैतुन, ओलिभ आयल, सोयावीन, सन फ्लावर, बदामको तेल स्वस्थ तेल ( भेजिटेबल आयल) अन्तर्गत पर्दछ । यस्ता तेलका सेवनले शरीरमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । त्यसैले, तेलको खरीद गर्दा यस्ता स्वस्थकर भेजिटेबल आयल प्रयोग गर्नु पर्दछ । हाइड्रोजेनेटिड तेलबाट टाढा रहनु पर्छ । किनकी यसमा अत्याधिक मात्रामा शरीरका लागि हानकारक मानिएको ट्रान्स फ्याट हुन्छ । याद राख्नुस्, कम वा शुन्य फ्याट हुँदैमा कुनै पनि खाद्य पदार्थ स्वस्थ कर हुँदैन ।
भोजन जस्तो सकुै गरे पनि त्यसलाई पचाउनका लागि सक्रिय रहन जरुरी छ । मानिस जति सक्रिय रहयो, उति नै धेरै स्वस्थ रहने गर्छ । त्यसैले, सक्रिय रहौ, स्वस्थ जीवन बाचौं ।
स्वस्थकर भोजनको थालीमा गुलियो पेय पदार्थलाई वर्जित गरिएको छ । किनकी यस्ता पेय पदार्थमा पोषणको मात्रा कम हुन्छ भने ‘क्यालोरी’ को मात्रा उच्च हुन्छ ।
स्वस्थ भोजनका लागि तयार पारिने थालीले भेजिटेबल आयललाई प्रोत्साहित गर्छ । र, स्वस्थ स्रोतबाट तयार पारिएको यस्ता तेलमा रहेको फ्याटको उपभोगमा कुनै सिमा तोक्दैन ।
स्स्वस्थ भोजनको थालीलाई क्यालोरी र परिणामको आधारमा वर्गीकरण गरिदैन । यसले प्रतिदिन दिनमा कति क्यालोरी सेवन गर्ने भनेर परिभाषित पनि गर्दैन । स्वस्थ भोजनको थालीले सापेक्षित अनुपातको भोजनलाई मात्र थालीमा समावेश गर्न सुझाव दिन्छ । यो क्यालोरीमा आधारित हुँदैन । किनकी मानिसहरुलाई उमेर, लिङ्ग, शरीरको आकार र गतिविधिको आधारमा भिन्न भिन्नै क्यालोरी र पोषण तत्वको आवश्यकता पर्छ ।
स्वस्थ भोजन युक्त थालीमा मदिरा सेवन गर्नै नहुने भन्ने हुँदैन । ठिक्क मात्रामा मदिराको सेवन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । तर यसलाई स्वथ्य भोजनयुक्त थालीमा भने समावेश गरिएको पाइँदैन । (अनलाइनखबर बाट सभार)
हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !! आज चम्किदैछ यी ८ राशिको भाग्य, तपाईको कुन ?